Location: musha » Kutumira » utano » Ngatitarisirei kuti COVID-19 igare: Wellness 4 Humanity
Ngatitarisirei kuti COVID-19 igare: Wellness 4 Humanity
Wellness 4 Humany ndeimwe yemakambani mazhinji anoita mari hombe nekuda kwedenda.
Zvingave zvakanaka here kufunga makambani akaita sePfizer, Moderna uye Wellness 4 Humanity anoda kuti COVID-19 igare.
Asi unogona kuvapa mhosva here?
Hutano 4 Hunhu inoti pawebhusaiti yayo: “Tinonzwisisa kuti munhu wese ane zvakasiyana siyana zvekuyedzwa. Yako yehutano concierge inogadzirisa mhinduro yakasarudzika kwauri. Chatinokoshesa kuchengetedza nzvimbo yako yebasa, zviitiko zvemakambani uye kuungana kwenharaunda kwakachengeteka. "
Wellness 4 Humanity vatengi vanosanganisira Atlanta Haws Basketball Club, Paramount, Sony, Orangetheory, IHG kana Ritz Carlton Hotel Cancun.
Inowanikwa mune imwe yenzvimbo dzepamusoro dzekutengesa muAmerica, iyo Ala Moana Shopping Center mu Honolulu, Wellness 4 Humanity iri kupa inodiwa yakanyanya kudiwa sevhisi nemari hombe. Vanopa sevhisi iyo veruzhinji hutano system inofanirwa kupa pachena. Vanopa sevhisi inononoka, nekuti iyo US Health system yakakurirwa.
Wellness 4 Hunhu hunopinda apo hutano hweveruzhinji hunotadza vanhu vanokwanisa kubhadhara mari yepamusoro.
Kuedzwa kwe COVID-19
Nepo COVID bvunzo muEuropean Uninion Nyika dziripo mahara, kana dzinenge mahara; nepo bvunzo dziripo munyika zhinji dzeEurope nekukasira uye kwese kwese, muHawaii nekusara kweUnited States awa mitsetse yakareba uye nguva refu yekugadzirisa inoita kuti kuongorora kusangoite kusachengeteka, kusashanda asi kazhinji kusingaite.
Kubva kuGermany kuenda kuGreece nzvimbo dzekuyedza dzinowanikwa muma pharmacy mazhinji. Decicated test centers dziri kwese kwese. Kuedza mahara kune vagari vemo kana kudhura chero chinhu kune wese wese.
MuGermany bvunzo yeCCIDID-19 inodiwa kuti upinde mumaresitorendi uye zvitoro kunyangwe wakabayiwa zvizere. Iri harisi dambudziko, nekuti bvunzo dziripo ipapo uye dziripo kwese kwese. Kana mutemo wakadaro ukatanga muUnited States, maresitorendi ese asara nezvitoro haaizorarama.
MuUnited States kuyedzwa kwemahara ibasa rakakura, rinotora maawa uye harisi kuwanikwa ipapo ipapo. Apa ndipo panopinda Wellness 4 Humanity nemamwe makambani akafanana.
Miedzo yekumba haiwanike muUnited States, nepo pharmacy yese muEurope ine yakawanda yemahara kana isingasviki gumi remaEuro.
MuHonolulu Wellness 4 Humanity, kambani yakazvimiririra kuita purofiti inopa sevhisi yekuyedza inodhura, isingadhurike nevakawanda vangangove vachiparadzira hutachiona muhuwandu hwerekodhi vasingazvizive.
Pa Wellness 4 Humanity, Rapid Antibody Test inodhura madhora makumi matanhatu nepfumbamwe nemhedzisiro mumaminitsi gumi, kana Rapid Antigen Test ine mhedzisiro mumaminetsi gumi nemashanu pamadhora zana nemakumi maviri nepfumbamwe. PCR bvunzo inogona kuita senge $69 uye mhedzisiro inogona kutora mazuva.
Kuedza imari hombe, uye Wellness 4 Hunhu hunoita purofiti yakakura uye vanoda kushandira vanhu, chero vaine mari yekuzvibhadharira.
Mutengi anogutsikana akatumirwa paHumanity webhusaiti: Great Experience. Ndakanga ndapinda nekubuda mumaminetsi gumi uye ndakagamuchira mhinduro mukati memaawa gumi nemaviri. First Kirasi sevhisi!
Wellness 4 Humanity uye mamwe makambani ekuyedza muUnited States haana mhosva, asi CDC nehurumende ndiyo ine mhosva.
Kuedzwa hakufanirwe kuve rombo kune vakapfuma. Kana izvi zviri izvo COVID-19 ichave iripo kwenguva yakareba, yakareba. Zvinosuruvarisa zvakare vanhu vasina mari yakawanda vanogona kutakura nekuparadzira hutachiona.
eTurboNews yakasvika kune vakawanda vakasarudzwa vakuru. Vanenge vese vakuru vakuru havasipo kuti vatore runhare, asi vanozopindura netsamba yakanaka yetemplate mutsamba inoteverwa nekusambomira kukumbira mipiro.
Atlanta Basketball CDC Covid Covid-19 Europe Jerimani Girisi Hawaii utano Honolulu hotera nyika dzakabatana
China inotyisidzira vatambi veOlympic 'nezvimwe zvirango' zvekutaura
Mashiripiti eNzvimbo Dzakanaka
Biden Administration yakakurudzira kusimudza chivharo pamavhiza eH-2B ...
Uganda Wildlife Authority Inoombera Mutongo Wemakore manomwe ...
Nyowani Butt Simudza muLiquid Fomu